6 Codsiyada khadka tooska ah loogu talagalay Tafatirka Sawirka Dufcadda | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadayntu waa dhaqan soo noqnoqday maalmahan waana in dad aad iyo aad u tiro badani ay isu qorayaan hawshan, taas oo ah waxay keentay tartan adag guurtidan gudaheeda, kuna qasbaya mid kasta oo ka mid ah khubaradan naqshadeynta inay dejiyaan istiraatiijiyaddooda suuq-geyn.
Waxay muhiim u tahay mid kasta oo iyaga ka mid ah bartaan barnaamijyada ugu badan iyo farsamooyinka suurtagalka ah, si loo qanciyo dhammaan dalabaadka uu soo jeediyo macmiil ama shirkad, iyadoo la maareynayo si dhammaystiran u hoggaansamida dhammaan shaqooyinka loo soo jeediyay iyada mar uun.
1 Codsiyada ugu wanaagsan ee khadka tooska ah ee duubista sawirada
1.1 Waxaan jeclahay IMG
1.5 Jaangooyooyinka Sawirada
Codsiyada ugu wanaagsan ee khadka tooska ah ee duubista sawirada
Si loo balaadhiyo buugaagta barnaamijyada, waxaan kuu keenaynaa a liiska arjiga internetka taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax ka beddesho sawirada qaybo badan, oo loo soo bandhigo sida soo socota:
Waxaan jeclahay IMG
Codsigan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kula shaqeyso sawirrada ku yaal gudaha Dropbox, Google Drive ama xaalku sikastaba ha ahaadee, oo ay kujiraan sawiro kumbuyuutarkaaga yaala.
Barnaamijkani wuxuu ina siinayaa wax kasta oo yar, maxaa yeelay waxay noo ogolaaneysaa inaan fulino howlo fudud oo ka kooban isku soo koobida sawirada adoon lumin tayadooda, taas oo kuu ogolaaneysa inaad sawirada si gaar ah ama koox koox ah aad ugu cabirto sidaasna aad ku jareyso. Waa codsi aad u fudud.
Codsigan waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican marka ay timaado qaab beddelidda. Codsigan khadka tooska ah ayaa noo oggolaanaya badalo "qaab kasta" in "qaab kasta", ikhtiyaar aan arki karno oo ka muuqda muuqaalkiisa. Dareenkaan, codsigan wuxuu ku shaqeyn karaa ficil ahaan qaab kastoo muuqaal ah oo aan helno. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xoogaa faa'iido daro:
Ma oggolaaneyso soo gelinta sawirrada.
Kaliya waxay bixisaa waqti beddelaad ah 25 daqiiqo maalintii.
Taa baddalkeeda, 25-kaas daqiiqadood sidoo kale waxay ku egyihiin ugu badnaan 1 GB faylkiiba.
Qalabkani wuxuu keenayaa xoogaa tayo gaar ah, suurtagalnimada ka beddel sawirrada RAW qaabab kale, sida PNG iyo JPG. Dareenkan, barnaamijkani wuxuu ku shaqeeyaa qaababka RAW ee Nikon iyo Canon si toos ah.
Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa ka-beddelashada CR2, NEF, ARW, ORF, PEF, RAF, DNG iyo noocyo kale oo qaabab ah oo loo jiheyn doono JPG, xitaa waxay la shaqeysaa sawirrada JPG, taasoo u oggolaanaysa sawirro badan oo isla mar ahaantaana isku mid ah.
Mid ka mid ah qodobka u roon codsigan ayaa ah in isdhexgalka uu yahay mid aad u raaxo badan illaa iyo inta muuqaalkeedu khuseeyo, oo u siinaya dadka isticmaala koox wax ku ool ah amarro.
Qalabkani wuxuu doonayaa inuu waxoogaa ka gudbo waxa guud ahaan codsiyada tafatirka sawirrada ee khadka tooska ah laga helo.
Halkan kaliya ma awoodno xajmi sawirrada, laakiin sidoo kale waa suurtogal in la adeegsado saameynta kuwan, iyo sidoo kale inaad ku darto astaamo sawirradaada ah. Waxaad ku shaqeyn kartaa sawirro ku yaal Facebook-gaaga ama sidoo kale sawirro ku yaal kombuyuutarkaaga, Picasa ama Flickr. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xadeyn, tusaale ahaan tirada sawirada waana taas inaan kaliya ku shaqeyn karno ugu badnaan 40 sawir oo kuwani miisaan ma yeelan karaan in ka badan 10 MB
Dib u habeynta sawirku waa mid ka mid ah howlaha ugu waaweyn ee codsigan. Qalabkani wuxuu kaloo maamushaa inuu soo jiito isticmaaleyaal badan iyada oo loo marayo interface raaxo leh, iyaga oo u oggolaanaya inay ku shaqeeyaan habka ugu fudud uguna macquulsan.
Si aad ula shaqeyso codsigan, kaliya dooro sawirka oo xulo cabbirka cusub ee aan u dooneyno. waa macquul ku cabbir sawirka 5 siyaabood oo kala duwan, ama boqolley ahaan, balac ahaan, dherer ahaan ama sameynta cabir sax ah. Waqtiga beddelaaddiisu waa gaaban tahay oo mashaariicdaada waxaa lagu soo dejinayaa qaab ZIP ah.
Codsigan khadka tooska ah waa mid aad u fudud in la isticmaalo. Kuu ogolaanayaa resize sawirro badan isla waqtigaasAdoo u dejinaya cabbir go'an iyaga, xitaa waa suurtagal in la jaro sawirada oo lagu daro xuduudaha iyaga, badeecad lagu soo dejin doono iyada oo ku saleysan feyl ZIP ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » 6 Codsiyada khadka tooska ah loogu talagalay Tafatirka Sawirka Dufcadda